Honiimuunu maka oge ọ bụla n'afọ | Akụkọ Njem
Honiimuunu maka oge ọ bụla n'afọ
Maria | | Ihunanya, njem
The honeymoon bụ njem pụrụ iche na nke a na-apụghị ịkọwapụta nke ndị lụrụ di na nwunye ọhụrụ ga-eme mgbe agbamakwụkwọ ahụ gachara ebe kachasị mma ebe ha nwere ike ịnụ ụtọ ezigbo paradaịs n'elu ụwa ụbọchị ole na ole. Nọmalị na nwunye na-ahọrọ ime njem a na ezigbo ihu igwe mgbe agbamakwụkwọ ahụ gasịrị, nke kachasị na-emekarị n'etiti May na Ọktọba.
Mmasị di na nwunye a agaghị ahọrọ ebe aga - eme njem ezumike ahụ. Iji zere ihe ịtụnanya ihu igwe (monsoons ma ọ bụ oge udu mmiri na udu mmiri oyi na mpaghara ndịda), ndị nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ ga-ahọrọ ebe ha na-eburu n'uche ụbọchị agbamakwụkwọ ahụ, n'ihi na njem a na-amalitekarị mgbe ụbọchị ole na ole gachara.
Ọ bụrụ na emikpu gị na nkwadebe maka agbamakwụkwọ gị ma ị na-achọ ozi iji hazie ezumike gị, anyị na-akwado ka ị gụọ post na-esonụ ka anyị ga-ekwu maka ebe kachasị mma maka oge ọ bụla n'afọ.
1 N'oge ọkọchị: Indonesia, Oceania na Africa
2 Mgbụsị akwụkwọ: Vietnam na India
3 Oge oyi: Latin America, Maldives na Kenya
4 Mmiri: Japan
N'oge ọkọchị: Indonesia, Oceania na Africa
Ọtụtụ ndị di na nwunye na-aga ebe ịchụàjà na ọnwa na-ekpo ọkụ n'afọ, n'ihi ya mba dị ka Botswana, Indonesia, Mozambique, Australia, Tanzania, ofu, Samoa na Polynesia bụ ebe kachasị aga site na ọnwa Juunu rue Ọktọba n'ihi ọnọdụ okpomọkụ dị jụụ na enweghị mmiri ozuzo.
Dịka ọmụmaatụ, agwaetiti ndị dị na South Seas na Indonesia dị n'oge oyi ha n'ihi ya anaghị ekpo oke ọkụ ma enweghị mmiri ozuzo. Ọzọkwa, ọ bụ oge dị mma iji gaa safari na Africa. N'ime ọnwa ndị a, mmiri anaghị ezo na mba dịka Mozambique, Botswana ma ọ bụ Tanzania na enweghị mmiri ozuzo na-eme ka ụmụ anụmanụ na-etinye uche na mmiri na-adịgide adịgide ma ọ dị mfe ịtụgharị uche na ha. Na mmechi, agwaetiti Fiji di na udu mmiri ya mere ihu igwe di nfe ma nwekwaa ihe egwu oke ikuku okpuru mmiri na udu mmiri. Na mgbakwunye, ọ bụ paradaịs nke mmiri doro anya na aja ọcha.
Mgbụsị akwụkwọ: Vietnam na India
Ebe ọ bụ na India bụ mba buru ibu, enweghị oge zuru oke iji leta ókèala ya niile, mana anyị nwere ike ịsị na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ udu mmiri agafeela ma ọnọdụ okpomọkụ na-atọ ụtọ karị. Ọ bụ otu n'ime ebe ndị a rịọrọ ka ị gaa n'oge ezumike nke ezumike maka anwansi nke ụlọ elu ya, ọdịiche dị n'etiti ọdịbendị, gastronomy ya bara ụba na ịma mma nke ala ya.
Maka akụkụ ya, oge dị mma iji mara Vietnam bụ site na mmalite oge mgbụsị akwụkwọ ruo Eprel. Obodo mara mma nke na-egbuke egbuke ya na ọtụtụ ihe nketa ya, gastronomy mbụ ya na ọdịnala gbanyere mkpọrọgwụ.
Oge oyi: Latin America, Maldives na Kenya
Oge kachasị mma iji nwee obi ụtọ na Maldives Islands bụ oge oyi, ọkachasị site na Disemba ruo Mee. Omuma ya 28 nke ọ na-adịkarị na osimiri osimiri ya na-eme ka mba a bụrụ ebe kachasị mma maka izu ike ma nwee anwụ mgbe agbamakwụkwọ ahụ gasịrị.
Maka ndị di na nwunye na-atụkarị ụjọ, ebe atọ na-atọ ụtọ nwere ike ịbụ Kenya, Chile na Costa Rica. Obodo Africa a bụ ezigbo ebe maka ndị họọrọ oge oyi ịlụ di na nwunye na ezigbo ndọta maka ndị na-achọ ngwakọta nke exoticism na njem na ezumike ha. Fọdụ n'ime ọrụ ndị a na-agaghị echefu echefu ebe a na-anọ n'otu n'ime ụlọ ndị Swahili na Lamu Island, na-agagharị na ndagwurugwu na oke ọhịa, na-ehi ụra n'okpuru kpakpando n'ime ụlọ dị n'elu osisi ma ọ bụ na-aga safari iji hụ ihe okike ebe nsọ nke mba ahụ.
N'aka nke ya, Chile bụ mba pụrụ iche ebe ndị lụrụ ọhụrụ ga-ahụ ọdịdị dị oke iche n'etiti ugwu ugwu Andes dị ịtụnanya, glaciers ndịda na ọzara ugwu. Offọdụ ebe kachasị anya ileta n’oge ezumike dị na Chile bụ ọzara Atacama, Easter Island, Viña del Mar, Puerto Varas ma ọ bụ isi obodo Santiago de Chile.
Jenụwarị ruo June bụkwa oge dị mma iji chọpụta Costa Rica, mba kasị dịrị nchebe na Central America. Oge ọkọchị ya kachasị mma iji gafee ókèala ya niile wee rafuo ya n'ụsọ osimiri na oke ọhịa ya.
Akụ na ụba nke Costa Rica bụ otu n'ime ebe kachasị mmasị maka ndị hụrụ ecotourism n'anya. Mmiri mmiri na-ekpo ọkụ ma dị ọcha nke Oké Osimiri Caribbean na-asa ya na n'ebe ọwụwa anyanwụ na Pacific Ocean n'akụkụ ọdịda anyanwụ, mba ahụ jupụtara na ebe ndị mara mma iji nwee obi ụtọ na okike n'ụdị ya dị ọcha.
Site na Machị ruo May na ọkachasị Eprel bụ oge magburu onwe ya iji mata Japan dịka osisi cherry na-amalite oge ntoju ma mba ahụ na-aghọ ogige dị egwu. Ohere puru iche ichota ubi ubi mara mma nke Asia ma obu zuru ike na isi iyi di oku.
Ebe ọ bụ na Japan abụghị nnukwu obodo, ọ dị mfe ijikọta ụbọchị ịzụ ahịa na nleta obodo iji mikpuo onwe gị na mgbagharị na ntụrụndụ nke nnukwu obodo ndị Japan nwere ụbọchị njem na nleta na ogige ntụrụndụ ya na ime obodo. .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Ihunanya » Honiimuunu maka oge ọ bụla n'afọ
Njegharị gaa Ugwu Takao, ebe panoramic dị na Tokyo
Itingga ileta ọgba ndị mara mma gburugburu ụwa